KDE 4.11 Beta1 waa la heli karaa | Laga soo bilaabo Linux
Kooxda ka dambeysa KDE SC ayaa ku dhawaaqay helitaanka nooca 4.11 Beta1, Hordhac ah waxa shaki la’aan noqon doona nooca ugu fiican silsiladda 4.X de KDE.
Qt Deg deg ah Goobaha Shaqada ee Plasma: Qt-Quick wuxuu sii wadaa inuu kusii socdo goobaha shaqada ee Plasma. Kaliya maahan inuu desktop-ka wax badan ka dheereeyo, laakiin wuxuu awood u siinayaa is-dhexgal ballaaran iyo codsiyo awood badan. Mid ka mid ah aaladaha muhiimka ah ee plasma, maareeyaha hawsha, ayaa dib loogu qoray Plasma Quick. Qalabka widhwidh-ka ayaa dib loo hagaajiyay oo macluumaadka ku saabsan dhammaan baytariyada (tusaale, jiirka, kiiboodhka) ee nidaam ayaa hadda la soo bandhigay.
Si dhakhso badan u tilmaamidda Nepomuk: matoorka macnaha ee 'Nepomuk semantic engine' wuxuu helay habeyn heer sare ah (tusaale, aqrinta xogta waa 6 jeer ka dhaqsi badan) Tilmaamiddu waxay u dhacdaa laba marxaladood: marxaladda koowaad waxay isla markiiba la soo baxaysaa macluumaad guud (sida nooca faylka iyo magaca). Macluumaad dheeraad ah sida MP3 tags, macluumaadka qoraaga iyo wixii la mid ah waxaa lagu soo saaray marxalad labaad, xoogaa gaabis ah. Daawashada metadata hadda aad ayey u dhakhso badan tahay, iyo dib u habeynta iyo soo celinta nidaamka Nepomuk waa la hagaajiyay. Nidaamku wuxuu kaloo leeyahay tusmeeyayaal dukumiintiyo cusub sida odt ama docx.
Kala hadal: Hadda waxaad haysataa tilmaame dhakhso leh oo loogu talagalay xogtaada PIM oo leh hagaajinta Nepomuk, iyo a tafatiraha mawduuca cusub cinwaanada cinwaanka. Qaabka aad u maamusho sawirada emaylka ayaa hadda kuu oggolaanaya inaad cabirto sawirada duulimaadka. Suite kasta oo KDE PIM ah wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo cilladaha cayayaanka ah, sida habka ay ula macaamilaan ilaha Kalandarka Google. Saaxiibka Soo Dejinta ee PIM wuxuu u oggolaanayaa dadka isticmaala inay soo dejiyaan dejimaha iyo xogta Trojita (macmiilka IMAP Qt ee macaamiisha) iyo dhammaan kuwa kale ee wax soo dajiya ayaa la hagaajiyay sidoo kale.
Horumarro badan ayaa laga heli karaa Qorshaha Waxqabadka 4.11 . Isticmaalayaasha qaansada waxay mar horeba ka tijaabin karaan meelaha aan xasilloonayn sida ay kari karaan mahadsanid halkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » KDE 4.11 Beta1 waa la heli karaa
elav, miyaad jeceshahay KDE, huh?
mid ka mid ah dijo
Caadi, waa desktop-ka ugu fiican ee dhashay madal kumbuyuutar oo kasta, bilaash iyo gaarba both
Ku jawaab onedetantos
Nahhhhhh, ma aqaano waxa ku siiyay aragtidaas.
Runtii waan jeclahay qaybahaas lagu qoray Qt Quick wali waxay kujiraan gacaliyahayga KDE <3
Waxa ugu horreeya ee indhahaygu qabteen shaashadda ayaa ahayd maamulka maareynta awoodda plasmoid. Wanaagsan!
Waa KDE 4.11, taasi waa, KDE> 3 😉
Ku jawaab Ñandekuera
Wuu ogyahay inay tahay KDE 4.11 in "3" aad dhigayso ay u egtahay bisad xanaaqsan (Waan ogahay inaad dooneysay inaad dhigto wax ka badan seddex).
Wuxuu dhigay <3 oo macnaheedu yahay qalbi ... xDDD
Aan cadeeyo ... «<3" waa mid shucuur leh oo muujineysa kalgacal, waxay la mid tahay shuminta oo kale.
Waxaan cadeeyay in «; ) »Waxaa loola jeedaa il-jabin, taasi waa wax wada-jir, taas oo ah, waxay ahayd kaftan waana ogahay inay ahayd wax yar oo qalbi ah ... haha
loogu talagalay isticmaaleyaasha OpenSUSE 12.3 waxay horay ugu jirtay keydka KDF
Mawduuc ka baxsan: Ma jiraa qof isticmaala ama u isticmaalay ROSA Launcher (aka Simple Welcome) Arch Linux? Waxaan isku dayay inaan markale u adeegsado, anigoo ka rakibaya AUR (kdeplasma-applets-rosalauncher), laakiin kama muuqaneyso liiska plasmoids-ka la heli karo: / Miyey la jaan qaadi doontaa nooca ugu dambeeya ee KDE?
Ku jawaab KaKaRoTo
Miyuusan ahayn in jawiga desktop-ka tmb soo baxo?
Xeerarka KDE !!!
Way fiicantahay marwalba, qaybta batteriga ma fahmin waxay muujineysaa heerka mas'uuliyada jiirka iyo kumbiyuutarka bilaa xadka ah ???
Ufff isla marka ugu horeysa ee RC soo baxdo ayaan isku tuuraa inaan isku dayo 😀
Qeybta mowduuca ka baxsan… Ma jirtaa ikhtiyaar lagu muujiyo astaanta NetRunner iyada oo loo marayo qaabeynta UserAgent? Waxay i tuseysaa midka Ubuntu 🙁 Oo haddii aysan jirin xulasho noocaas ah, yaan u baahanahay inaan u diro astaanta si ay u muuqato? xD Dhamaan waad salaaman tihiin
kiiskeyga waxaan isku dayay inaan ku wareejiyo ku saabsan: config laakiin maahan sidaas, way sii waday muujinta astaanta ubuntu; markaa waxaan ku dhammeeyey anigoo adeegsanaya aalad la adeegsado oo loogu talagalay firefox-ka laptop-ka. Weli kumuu dul dhigin desktop-ka.
Ku jawaab nosferatuxx
Tani waxay kaa caawin kartaa: https://blog.desdelinux.net/tips-como-cambiar-el-user-agent-de-firefox/
Way ii shaqeysay markii aan Firefox-ka Windows-ka ugudbo Iceweasel.
john moon dijo
Wow, waxaan haystaa 4.8 Debian. Sideen ugu aaday restinga?
Jawaab Juan Luna
Waan ka xumahay, waxaan ula jeeday "Tijaabinta" waa in hubiyaha Android beddelay ereyga XD
Kufiican KDE. Waxaan rajeynayaa in desktop-kani uu ka sii fiicnaanayo oo ka sii fiicnaanayo maadaama Slackware uu si caqli leh u doortay miiskaan ka hor inta uusan GNOME cadaab la gelin kii 3-aad. nooca.
iga raali noqo, waxaan tijaabinayay wakiilkeyga isticmaalaha
Gaadho iftiinka buluuga ah, dheelitirka, Buddha. La dhammeeyey, hadda waxaan rakibay Chakra
Hahahaha, weedh aad u fiican si aad u bilowdo qoraal ku saabsan Chakra 😉
Waxaan rajeynayaa inaan kugu arko fagaaraha!
Oops, waxaan ilaaway inaan qurxiyo UA midabada Chakra iyo KDE SC 😀
Waxaan la yaabanahay intee in le'eg ayey qaadan doontaa in lagu tago Chakra iyadoo deggan, Chakra waxay u adeegsaneysaa KDE, inta kalena waxay la socotaa Arch. Waa inuu jiraa ikhtiyaar noo oggolaanaya inaan ka saarno faallooyinkayaga.
Waan jeclahay KDE laakiin waxay qaadataa 40 seken in la bilaabo (gab adeegyada kala duwan oo isku mid ahaada -.-)
40 ilbiriqsi si aad isu abaabusho oo aad u cadeyso waxa la sameynayo, sax?
Laakiin haddii aad ka walwalsan tahay, waxaan Arch ula isticmaalaa Openbox sidaa darteed waqti dheer ma qaadanin, Gentoo aan lahayn X si ay u sameeyaan sharraxaad deg-deg ah oo ay dhagaystaan ​​muusikada iyadoon la mashquulin
Haddana Chakra, laakiin wali waan u dulqaataa waqtigaas
KDE waxay umuuqataa midfiican markasta 😀
Ku jawaab ChepeV
Markay tahay badhanka kaydinta iyo soo celinta Kontact ama Akonadi dhammaan KDE-PIM? E-mayl, dejinno, xiriiro, qoraalo, kalandarro, abaabulayaal, iwm.
Akonadi hadda kaliya wuxuu nuqulayaa waxa nool, ee la wadaagayo, sidaa darteedna maahan inuu nuqulo dhammaan xogtaada iyo dejimahaaga.
Haa, waan ogahay inay jirto qaab tilmaam ah. Laakiin maxay iyagu u samayn la’yihiin qalabkan fududeynta? Iyo inay sidoo kale la jaan qaadi karaan noocyada mustaqbalka ee barnaamijyadan.
Waxaan u maleynayaa in Akonadi uu noqon doono jawaabta, laakiin hadda way ka fog tahay inay noqoto qalab run ah oo dib u soo celin / soo celin ah oo kalsooni iyo kalsooni ku siinaya daaweynta dhammaan xogtaada iyo qaabeyntaada marka loo eego PIM.
Ku hagaaji khibrada isticmaale ee Linux Mint Olivia oo leh Cairo-Dock.